Qunyar-socodnimada RW Rooble oo Noqotay Xalkii Soomaaliya | KEYDMEDIA ONLINE
Qunyar-socodnimada RW Rooble oo Noqotay Xalkii Soomaaliya
Ra’isul Wasaare Maxamed Xuseen Rooble ayaa noqday siyaasiga looga hadal-heynta badnaa beryihii lasoo dhaafay kadib mowqifyadii masiiriga ahaa ee uu ka istaagay arrimaha doorashada iyo kiiskii Ikraan Tahliil.
MUQDISHOI, Soomaaliya - RW Rooble oo dad badan ay ku tilmaami jireen qunyar-socod ama siyaasi aan wax badan uga bilowneyn siyaasadda Soomaaliya ayaa taageero badan ku helay xilka-qaadista agaasimihii hore ee NISA, kaas oo ku eedeysan dambiyo iskugu jira dil iyo af-duub.
RW Rooble ayaa kalsooni fara badan ka helay maamul-goboleedyada iyo siyaasiyiinta mucaaradka ah kadib markii ay soo ifbaxday in tayadiisa hogaaminta ay salka ku heyso mabaa’dii ku qotoma cadaalad iyo run-sheegid.
Hogaamiyaha Galmudug Axmed Kaariye (Qoorqoor) ayaan wali shaacin mowqifkiisa ku aaddan xilka-qaadista Fahad Yaasiin oo ah ninkii gacanta ku siiyay saldanada uu ku fadhiyo maanta. Wararka qaar ayaa sheegaya in Qoorqoor maalmihii lasoo dhaafay uu xusul-duub ugu jiray sidii Fahad Yaasiin qoolka looga bixin lahaa, isla markaana looga badbaadin lahaa xilka-qaadista RW Rooble uu la damacsanaa saaxiibkii.
Maxamed Abtidoon oo ka mid ah xildhibaanada federaalka, islamarkaana kasoo jeeda Galmudug ayaa ku tilmaamay “Nasiib daro in uu Qoorqoor ka shaqeynayo in ay ka horyimaadaan saddaxda DG ee Galmudug, Hirshabeele iyo Koonfur Galbeed go’aanka masuuliyadeed ee RW [Rooble] ka gaaray kiiska Ikraan.”
Sidoo kale, C/raxmaan Cabdishakuur Warsame, oo ka mid ah siyaasiyiinta u taagan xilka doorashada madaxweyne, ayaa ugu baaqay Qoorqoor, Guudlaawe iyo Laftagareen “Haddaba waxaan ugu baaqayaa madaxda dawlad Goboleedyada, saraakiisha amniga iyo siyaasiyiinta rajada ama cabsida ka qaba in Farmaajo iyo Fahad awood la soo noqdaan, in ay indhaha kala furaan.”
Dadka ku xeeldheer falanqeynta siyaasadda ayaa ku tilmaamay in RW Rooble lagu xasuusan doono in uu shacabka Soomaaliyeed ka qabtay Fahad iyo Farmaajo, kuwaas oo masiirka ummadda Soomaaliyeed ka dhigay wax lagu qamaari karo.
Dhowr bilood kadib magacaabistii RW Rooble, waxaa soo ifbaxday in uu yahay nin nabadeed, oo aan lagu aqoon dagaal iyo isqabqabsi. Balse dad badan ayaa ku qancay haatan in qunyar-socodnimada RW Rooble ay aheyd xalka kaliya ee lagu maareyn karay caqabadaha Farmaajo iyo Fahad ay ku hayeen geedisocodka arrimaha Doorashooyinka iyo xal-u-helista kiiskii Ikraan Tahliil.
Cabdi Aaddan oo ka faallooda arrimaha siyaasadda geeska Afrka ayaa yiri “Siyaasiyiintu waa labo; mid laablakac ku shaqeeya, go’aamadiisuna u badan yihiin wax laga qoomameeyo, iyo mid qunyar-socod ah, balse go’aamada iyo tilaabooyinka uu qaadayo aad uga fiirsada. Labadaas waxaa mar walba waari og siyaasiga arrimaha cakiran si daggan u xaliya, oo aan ku dagdagin go’aanka.”
Farmaajo oo hogaankiisa looga bartay go’aan seefla-boodnimo ah ayaa noqon doona siyaasigii labaad ee uu salfado hogaamiye qunyar-socod ah, marka loo eeggo khilaafkii dhexmaray RW Nuur Xasan Xuseen, (Nuur Cadde) iyo C/laahi Yuusuf, taas oo sababtay in C/laahi Yuusuf looga adkaaday masraxa siyaasadda.